I-Swing2App: Elona qhinga le-Ultimate No-code yoPhuculo loSetyenziso » Martech Zone
Kukho ubungqina obaneleyo phaya malunga nokuba ii -apps zeselfowuni zithathe njani ii-smartphones. Ukuba ayilikhulu, kukho iapps enye phaya ngaphandle kuyo yonke injongo.
Kwaye okwangoku, oosomashishini abangoovulindlela basakhangela iindlela ezintsha zokungena kumdlalo wesisombululo sokuhamba. Umbuzo oza kuwubuza, nangona kunjalo, ngulo: -
Mangaphi amashishini amatsha kunye noosomashishini abanakho ukuhlawula indlela yesiqhelo yophuhliso lweapp?
Ayisiyiyo kuphela inkxaso-mali yesicelo sophuhliso kunye nokuchitha ixesha, kodwa ikwonyusa ixesha ukuya kwintengiso. Ukuqala kunye nemibono emitsha akunakubeka emngciphekweni wokuphulukana nesibonelelo sokuqala.
Ngenisa amaqonga amaqonga ezinto ezingafakwanga khowudi, mnyama omtsha wophuhliso losetyenziso lweselfowuni.
Iikhowudi zeeNkqubo ezingasasebenziyo zenza ukuba uPhuculo lweApp lube lula
Ngaphandle kwabenzi beekhowudi zeekhowudi, umbono wemibutho kunye nokuqala okuncinci kutshintshe kakhulu ekuziseni umbono wabo kwindawo yentengiso yeselfowuni.
Into ebikade ibiza kwaye ingafikeleleki kwii-SMEs kunye nokuqala, ngoku ilungiselelwe ukubanjwa nangubani na onoluvo losetyenziso lweselfowuni. Kwaye-into ebikade ithatha iinyanga kunye nokuphindaphinda into enokwenzeka ngoku kwimizuzu.
Swing2App sisixhobo esimangalisayo esenza konke oku kungasentla nangaphezulu. Iqonga livumela abantu abangenalo ulwazi okanye izakhono malunga nenkqubo yokwenza iapps zabo ngamanyathelo nje ambalwa alula.
Inika inqwaba yeempawu simahla kwaye njengenxalenye yezicwangciso ezifikelelekayo. Iqonga lijongana nayo yonke into esemva. Ke, abathengi babo akufuneki batyale imali kuzo naziphi na izixhobo okanye itekhnoloji yokugcina ukusebenza kwabo kusetyenziso.
Swing2App umenzi weapp uvumela abasebenzisi ukuba bahlaziye usetyenziso ngendlela elula. Makhe sijonge kwiimpawu esizibonayo ngokweenkcukacha-
Izibonelelo zeSwing2App Codeless Mobile App yoKwakha
Uphuhliso olungenamngcipheko -Akukho-khowudi yeqonga losetyenziso elinika ithuba lokuzama izimvo zakho zesoftware. Unokwenza i-MVP kuqala ukukhangela amanzi, oko kukuthi, ukubona ukuba abantu bayifumana njani ingcinga yakho yosetyenziso. Ukuba impendulo ilungile, ungaqala ukwenza usetyenziso olayishwe izinto ezifanelekileyo. Ngale ndlela, awutyali isixa esikhulu semali kwimbono yosetyenziso enokuthi isebenze okanye ingasebenzi.
Ezingenakunciphisa - Ii-SMEs kunye nokuqala ngokubanzi azinayo imali eninzi yokutyala imali kuphuhliso lweapp kumanqanaba okuqala. Endaweni yokuqokelela kunye nokutyala amawaka-waka eedola, akukho-khowudi yeqonga labadali elinikezela ngeendlela ezininzi ezinokufikeleleka nge DIY indlela. Ngaphandle kokuqesha iqela elingaphakathi endlwini okanye ukukhuphela ngaphandle abenzi bexabiso, abaphuhlisi kunye nabahlalutyi, oosomashishini banokwenza ii -apps zabo nge-UI enkulu ngaphandle komgca wekhowudi.
Ixesha elincitshisiweyo lokuThengisa -Uluvo lokusebenza olukhulu lweselfowuni kufuneka luthunyelwe kwiimarike ngokukhawuleza. Ukuba akukhange kubenjalo, omnye umntu angabe iindudumo. Ke, endaweni yeenyanga, unokwenza iapp kwiiyure ezimbalwa ubuninzi ngaphandle kwamaqonga angenakhowudi. I-Swing2App ine-curve yokufunda ngokulula, ke uya kuba nakho ukuyisebenzisa kakuhle ngaphandle kwexesha kwaye uqalise imveliso yakho kwakamsinya kunabo ukhuphisana nabo.
Iimpawu zeSwing2App Codeless Mobile App yokwakha
Izaziso zePush -Izaziso zokutyhala sisixhobo esihle sokunceda ukugcina ukubandakanyeka kwi-app yakho kunye nokunyusa izinga lokugcina. Ngaphandle kwesi sixhobo, usetyenziso lwakho aluyi kuba nakho ukuhlaziya abasebenzisi ngayo nayiphi na into, ngaloo ndlela kuncitshiswa ukubandakanyeka kakhulu. Into elungileyo kukuba, ungadibanisa eli nqaku kwi-app yakho eyenziwe ngeSwing2App no-code app development tool.
CMS -Iapps zifuna inkqubo esebenzayo yolawulo lomxholo ukulawula umxholo kwiapp. I-Swing2App ibonelela ngolu hlobo kwi-portal yolawulo yeapp.
Izikhokelo ezenziwe ngokwezifiso -Iqonga libonelela ngeendlela ezahlukeneyo ezinokuthi zenziwe ngumdali ngokwemfuno nganye. Ezi templates zizinzile kwaye azibonisi imiba nasemva kokuba usetyenziso lusebenze ixesha elilungileyo.
Ezivelelayo zeapp -Nyusa ithuba lokuqhuba ukubandakanyeka ngokongeza ii-popups ezisebenzayo kwi-app yakho yeselfowuni.
Uhlalutyo - Qonda Ukuziphatha komsebenzisi ngoncedo lweli nqaku. Ungaguqula isimilo somsebenzisi siye kubalo malunga nezinto abasebenzisi abazithandayo, abangazithandiyo, njalo-njalo kwi-app yakho. Oku kunceda ekwenzeni imikhankaso ekujoliswe kuyo kunye nokuphucula iinkonzo.
Guqula iwebhusayithi ibe yiApp -Kungcono konke ukuba unayo iwebhusayithi. Ungayibhangqa kunye nesoftware esebenzayo ngokupheleleyo oyenzileyo kwiwebhusayithi yakho.
Ngaba akukho Khowudi yoPhuculo loSetyenziso ikamva?
Njengoko sisenza kwaye siyila yonke imihla, i-domain yophuhliso lwesoftware iqinisekile ukufikelela kwelinye inqanaba. Ngexesha, ngokuqinisekileyo sikholelwa ukuba izixhobo zekhowudi ezikhoyo ngoku ziya kulungiswa ngoncedo lweetekhnoloji ezivelayo kwaye ziya kungqina ukuba ziyinxalenye yeetekhnoloji zokuphuhlisa usetyenziso.
Qalisa ukwakha i-App yakho yokuqala yeSelfowuni
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa eyam Swing2App ikhonkco lokudibana kweli nqaku.
tags: usetyenziso lwe-androidumakhi weappsumakhi weappumakhi weappleengenakhowudiusetyenziso lwe-iosUmakhi we-app ye-iPhoneusetyenziso lweselulaumakhi wosetyenziso lweselfowuniakukho khowudi
I-PowerInbox: Iplatifomu yemiyalezo emininzi yeMultichannel